We.com.mm - ဂိမ်းကစားခြင်း၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး (၉)ချက်
3 years ago by Shane
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဂိမ်းကစားတဲ့လူငယ်တွေအတွက် လူကြီးတွေအမြဲပြောလေ့ပြောထရှိတယ့် စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ "ဂိမ်းကစားတာ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူး" ဆိုတဲ့အချက် သင်သတိထားမိကောင်း ထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းတွေက လူငယ်တွေကိုဖျက်စီးတယ် ဘာညာလည်း ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Negative တွေများတဲ့အထဲက ဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ဂိမ်းကစားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ကျန်းမာစေတယ်တဲ့။ ကဲ ဘယ်လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတာလဲ? ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲ? အောက်ကအချက်တွေက ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း မပြောခင်မှာ ဒီအချက်တွေက သင်တစ်နေ့လုံးဂိမ်းကစားဖို့ အကြာင်းပြချက်တွေတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေးရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ဘာမဆို မျှမျှတတလုပ်ဖို့ပါ၊ အပြင်ထွက်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပျော်၊ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်၊ မိသားစုအတွက်လည်း အချိန်ပေးရင်းနဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဂိမ်းကစားကာ အကျိုးကျေးဇူးခံစားဖို့ပါ။
အကယ်၍ သင့်မှာ စာတွေမမှတ်မိ၊ မမှတ်နိုင်တဲ့ Dyslexia လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါရှိရင် သတင်းကောင်းပါပဲ။ ဂိမ်းကစားရင်း ဒီရောဂါအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သုတေသီတွေကတော့ Dyslexia အကြောင်း လေ့လာဆဲပဲဆိုပေမယ့် Theory တစ်ခုကတော့ ဂိမ်းကစားခြင်းဟာ အချိန်အကြာကြီးအာရုံစိုက်ရတဲ့အတွက် သင့်ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ကို ပြန်ကောင်းလာစေဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုကို ကစားဖို့ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိဖို့လိုပြီး အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေအတိုင်းကစားမှ ဂိမ်းကအောင်မြင်မှာဆိုတော့ အားလုံးကိုသိ၊ မှတ်မိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဥပမာ Call of Duty တို့ Gears of War အစရှိတယ့် Military game တွေပေါ့။ ဒီလိုဂိမ်းတွေကစားရင်းနဲ့ သင့် Brain ကို Challenge လုပ်နေတာမို့ သင့်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလိုက်တာ သင်သိရှိထားတဲ့ Computer or Tv ကို အကြာကြီးကြည့်ရှုရင် အမြင်အာရုံချို့တဲ့တယ် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ကွဲလွဲနေပါလိမ့်မယ်။ မှန်ပါတယ် အကယ်၍ သင်ဟာ Tv or Computer ကို အနီးကပ်အကြာကြီးကြည့်ဖြစ်ရင်တော့ သင့်မျက်စိ ထိခိုက်ကောင်းထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ လိုအပ်တဲ့အကွာအဝေးကပဲ ပုံမှန်လေးကြည့်နိုင်ရင်တော့ သင့်အမြင်အာရုံအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတောင် ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာသူတွေရဲ့ စစ်တမ်းအရ ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့ Details တွေ အကုန် အမြဲမှတ်မိပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ သင့်မျက်လုံးတစ်စုံဟာလည်း အမြဲလိုလိုသွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားနေတာ သင်သတိထားကြည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချိန်အတိုင်းအတာ ကန့်သတ်ထားတာတွေလည်းရှိတာမို့ ပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အမြန်ကြည့်ရှုမှတ်သားရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လည်း မျက်စိဘေးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ ပိုမိုအလုပ်လုပ်လာပြီး သင့်အမြင်အာရုံတွေ အမြဲဖြတ်လတ်လာတာကို သင်ကိုယ်တိုင် သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း Gamer တွေရဲ့မျက်လုံးဟာ သာမန်လူတွေရဲ့ မျက်လုံးထက် ပိုလျှင်မြန်ကြောင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
Computer game စတင် ပေါ်ပေါက်လာချိန်ကစလို့ အခုဆိုရင် တော်တော်လေးခရီးရောက်နေပါပြီ။ စတင်ပေါ်ပေါက်စဉ်အချိန်တည်းက ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေ ဂိမ်းရဲ့ Missions တွေ အောင်မြင်အောင်ဆော့ရင်း Game တစ်ခုပြီးဆုံးအောင် နာရီပေါင်းမှားစွာ အချိန်ပေးရတာ သင်ကိုယ်တိုင်ဆော့ဖူးရင်လည်း သိပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘက်ခေတ် အရောက်မှာတော့ ခန္ဓာကို်ယ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပါ၀င်တဲ့ Game တွေ ( ဥပမာ Xbox, Wii ) များစွာ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ကလို့ ခုန်လို့ ရမယ်၊ ဂစ်တာတီးလို့ ရမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလို Activities တွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကြွက်သားတွေ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေ၊ ဝိတ်ကျတာမျိုးတွေအထိ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာအဲဒီလို Activities မျိုးတွေကို သဘောကျတဲ့သူဆိုရင်တော့ Game ထဲကထွက်ပြီး Real life ထဲက Game တွေကစားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Real life sport games တွေမှာ ကစားခြင်းကသင့်ကို ပိုမို Fit & Healthy ဖြစ်စေမယ့်အပြင် Social ပိုင်းမှာလည်း ပိုမို တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း Sport ဝါသနာပါတဲ့ မိမိကလေးတွေကို Real life games တွေဆော့ဖို့ အကြံပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။
တီထွင်နိုင်စွမ်းက ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ် ပြီးတော့ Video games တွေက ဘယ်လို Gamers အမျိုးအစားကိုမဆို တီထွင်နိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အရင်ဆုံး Military နဲ့ Shooting Games တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီ Games တွေမှာဆိုရင် Mission တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ ဘယ်ကိုသွားရမလဲ၊ လက်နက်တွေအကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း အကုန် လေ့လာရပါတယ်။ Game level တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာနဲ့အမျှ လူဆိုးတွေကို ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ သင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေနဲ့ စဉ်းစားရပါတယ်။ Sport games တွေမှာဆိုရင်လည်း ပုံမှန် Level ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် New tricks တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အခြားနာမည်ကြီး games တွေဖြစ်တဲ့ Dota 2, LOL, Counter strike စတဲ့ Game တွေမှာလည်း သင့် Creativity, Teamwork ပေါင်းပြီး တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ အမှားကိုစောင့်ကာ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စက္ကန့်နဲ့အမျှချနေရတာမလို့ သင့် Creativity ကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေတာ အမှန်ပါပဲ။ Creativity ဆိုတာ ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဘဝခရီးမှာလည်း Creativity က တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါ၀င်တာမလို့ Gamers တွေအတွက်တော့ Training ရှိပြီးသားလို့ ပြောရမှာပါ။
ဦးနှောက်နဲ့ အမြင်စွမ်းရည် တိုးတက်လာနိုင်
Game တစ်ခု ကစားတိုင်းမှာ သင့်ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်တဲ့ပမာဏကို သင်စဉ်းစားကြည့်ဖူးပါသလား? Level တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာလေလေ သင့်ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်လာလေလေ ပါပဲ။ Game တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သင် Game ထဲမှာပါတဲ့ Patterns တွေကို အရင်ဆုံးမှတ်ဖို့ လိုပါပြီ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Game ရဲ့ Missions တွေ၊ Characters တွေ၊ Items တွေ စသည်ဖြင့် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း မှတ်သားရပြန်ပါပြီ။ ကိုယ့် Creativity နဲ့ ပေါင်းပြီး ကစားရတဲ့ Game တွေဆိုရင် သင့်ဦးနှောက်ကို ပိုပြီးတောင် အလုပ်ပေးရပါသေးတယ်။ Wii games တွေမှာဆိုရင်လည်း ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်း နှစ်ခုလုံး တစ်ချိန်တည်းမှာ သင့်ကို လုပ်ဆောင်ခိုင်းတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ သင့် Highscore ကိုတောင် အနိုင်ရဖို့ အသည်းအသန် ဆော့ရတာတွေရှိပါတယ်။ Game တစ်ခုကစားတိုင်း သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့အမြင်အာရုံတွေက ဖျတ်လက်စွာ အလုပ်လုပ်နေတာမို့ တစ်ယောက်ယောက်က Game ကစားတာ မကောင်းဘူးလို့လာပြောရင် ဒီအချက်တွေနဲ့ ထောက်ပြလိုက်ပါ။
Video games တွေကို အကြာကြီး ကစားတာများရင်တော့ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ Video games တွေက သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀မ်းနည်း၊ နာကျင်စရာတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဆိုပါစို့ သင်ဟာ ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်နေမယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Game တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီစိတ်ညစ်စရာတွေကို သင်ခဏလောက် မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် - Dota2pro gamer Dendi ဆိုရင် သူ့အဖေဆုံးသွားလို့ စိတ်ညစ်စရာတွေကို Game ထဲမှာဖြေဖျောက်ရင်း ကမ္ဘာကသိတဲ့ Pro gamer တစ်ယောက် ဖြစ်လာတာပါ။ သင့်မှာပေါက်ကွဲစရာတွေ ရှိလာရင်လည်း Game ထဲမှာ အစွမ်းကုန်ပေါက်ကွဲလိုက်လို့ ရပါတယ်။ Games ကစားနေချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က Endorphins လို့ခေါ်တဲ့ Painkiller hormone တွေ ထုတ်လွင့်နေပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ သင့်မှာ တစ်ခုခု ၀မ်းနည်း၊ နာကျင်စရာတွေ ရှိလာပြီဆိုရင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Game တစ်ခုခုကို နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးပြီး ကစားကြည့်လိုက်ပါ။
Social Skills ပိုင်းလည်း တိုးတက်လာနိုင်
Games တွေ ဆော့ရင်းနဲ့ Social skills တွေလည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ခု တိုးတက်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Games တော်တော်များများက အရင်လို Lans နဲ့ ဆော့ရတာချည်းပဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Online games တွေ ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဆိုတော့ သင်ဟာ Online game တစ်ခုကို စတင်ကစားပြီဆိုရင် သင့် Teammates တွေ အခြား Online players တွေနဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ထိတွေ့ပြီး စကားပြောရတာတွေ ရှိလာပါပြီ။ မိတ်ဖွဲ့ကြမယ်၊ Game အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်တွဲခေါ်ရင်း Game အောင်မြင်သွားရင်လည်း ပီတိတွေနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးကြရင်း သင့် Social skills တွေကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။ အဲဒီ အကျိူးကျေးဇူးတွေက အပြင်လောကမှာ မိတ်ဖွဲ့ရင်ပဲ ဖြစ်စေ၊ သင့်မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာပဲ ဖြစ်စေ တစ်ထောင့် တစ်နေရာက အကူအညီပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ တစ်ချို့ Games တွေက ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မြန်ချရတာတွေ ရှိပါတယ်။ သင်ရဲ့ အခြေအနေအားလုံးကို သုံးသပ်ပြီး အချိန်တွေမကုန်ခင် မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ အဲတာတွေ အကုန်လုံးကလည်း Decision-making skills တွေအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ခု ပြောနေတာတွေက မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ သင့်ဆုံးဖြတ်မှု Skills အတွက် သင်ယူဖို့ ပြောချင်တာပါ။ Video games တွေ ကစားခြင်းအားဖြင့် သင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အမြဲလိုလိုချနေရပါတယ်။ အမြဲလိုလိုမှန်နေချင်မှလည်း မှန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး၊ Level နောက်တစ်ခုကိုတက်ဖို့ သင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါပဲ။ ဒီအချက်တွေက သင့်ကိုဘဝအတွက် အများကြီးအထောက်အကူပေးပါတယ်။ သင့်ကိုသင်ကျေနပ်အားရမှု ရှိလာပြီး ဘော်ဒါတွေနဲ့ဖြစ်စေ၊ အလုပ်မှာဖြစ်စေ တိုးတက်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်။
သင်ဂိမ်းဆော့ရင်းတစ်ခုခုစားချင်တာမျိုးရှိခဲ့ဖူးပါသလား? ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ Snacks တွေဘေးမှာအများကြီးနဲ့ Game ကစားနေတယ့် Characters တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတွေ့ဖူးပါတယ်။ သင်ရောအဲဒီလိုပဲလား? သင် Game တစ်ခုစဆော့ပြီဆိုရင်သင့်ရဲ့ Focus က Screen ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်။ သင့်လက်တွေကလည်း Controllers တွေနဲ့မအားမလပ်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့သင့်မှာအစားစားဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။ အအေးလေးတစ်ငုံလောက်ငုံလိုက်ရရင်တောင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကလည်း Snacks တွေပေါ်မှာအာရုံမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ Game နဲ့ Busy နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အများစုက Snacks ကို ပျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Stress ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်ပေးထားတဲ့အနေနဲ့စားကြတာပါ။ Game ကစားရင် Busy နေတာဆိုတော့အဲဒီပြဿနာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့မလိုအပ်တဲ့ဝိတ်တက်မှု့တွေမရှိတော့တဲ့အပြင် အစာစားဖို့တောင်မေ့နေလို့ ဝတယ်လို့ထင်နေရင်တောင်ဝိတ်ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာရှိလို့ ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ပြီး ကစားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေပြီးတိုင်း မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ ထိ ကစားပေးရုံနဲ့ သင်နဲ့သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားနှုန်းကို သိသိသာသာလျော့ကျပျက်စီးစေတဲ့ Wifi အသုံးပြုခြင်း
အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်သံမထွက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၇) သွယ်
အစာအိမ်အချဉ်ဖောက်ခြင်း နှင့် အစာအိမ်ရောဂါအကြောင်း
Period ချိန်တွင်းမှာ နာကျင်မှုတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်း (၄) ခု…